ကွာသပတေး သားသမီးမြားဖတျရနျ – သုတရသ
စကားနည်းတယ်လိုပြောကြတယ်။ မသိတဲ့သူတွေနဲ့သာအေးတာ။ မျက်နှာထားတည်တတ်လို့ မသိတဲ့သူတွေက မာနကြီးတယ်လို့ ပြောကြတယ် သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာဆို သူစကားအများဆုံး အပေါင်းအသင်းလည်းများတယ်။
လူချစ်လူခင်ပေါသလောက်လူမုန်းလဲ များတယ်။ ဒါပေမဲ့ အကြောက သိတယ်မလား။ေ ခွးဟောင်တိုင်းထမကြည့်တတ်ဘူး။ဉာဏ်ကောင်းသလောက် အပျင်းကြီးတယ်။ဘယ်လောက်ပျင်းလဲ ဆို ပျင်းရမှာကိုပျင်းနေတာ။ စိတ်အေးပေမဲ့ စိတ်ထက်တယ်။စိတ်မြန်တယ်။
သဘောတော့ကောင်းတယ်။ စိတ်ကြီးတယ်။ မဟုတ်မခံ ဆတ်ဆတ်ကြဲတွေပေါ့။ သည်းခံတတ်တာလည်း ကြာသပတေး သားသမီးတွေပါပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ သူ့ကိုကြောလိုက်ရင် ရှေ့တင်မှာ မျက်နှာမပျက်ပေမဲ့ အိမ်ရောက်ရင် တနုံ့နုံ့ နဲ့ အအိပ်ပျက် အစားပျက်ပဲ။ (ဘယ်လိုပြန်လုပ်လိုက်ရမှာဆိုပြီး)
သူတို့ကို သေးသေးတော့ သွားမတင်လေနဲ့။လုံးကြီးတင်ပြီး အဆံပါခတ်တတ်တာလည်း ကြာသပတေး တွေပါပဲ။ အရှက်ကြီးတယ်။ စာနာ နာလည်မှုလည်း ပေးနိုင်စွမ်းတယ်။ ရှိသမျှလည်းပေးကမ်းစွန့်ကြဲဖို့ ဝန်မလေးတက်ကြဖူး။ သူများမလုပ်နိုင်ဖူးဆိုတာကို ရွေးပြီလုပ်ပြတတ်တယ်။
မလုပ်ရင်အရှင်းလုပ်ပြီဆိုရင်တော့ သူသေရင်သေ သူမသေရင် ကိုယ်အသေ ဆိုတဲ့လူစားမျိုးတွေပဲ။ ကြာသပတေး သားမီးတွေကို လိမ်ရင်တော့ သွားလိမ်တဲ့သူတွေက သူတို့အတွက် လူရွှင်တော်ပါပဲ(သိသိကြီးနဲ့နားထောင်နေတာ)။
တစ်ခါသူတို့ကိုလိမ်လိုက်ရင် နောက်ဘယ်တော့မှ အယုံအကြည်မရှိတော့ဘူး။အချစ်ရေးမှာတော့ကံခေသူတွေပေါ့။ အမြဲတမ်းရတာမလို လိုတာမရတွေလေ။ မရနိူင်တာကိုမှ တမ်းတမ်းစွဲနေတတ်တာ။ ကြာသပတေး ဆိုတော့ စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက်လွယ်တယ်
စိတ်မြန် လက်မြန်လေးဒွေ ကြာကြာလဲ စိတ်မဆိုးတတ်ကြဘူး။ ပျော်ရွှင်တဲ့ RS ကိုဖန်တီးယူတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကြာသပတေး သားသမီးတွေကို အချစ်ကြီးသူတွေလို့ ပြောကြတာ။ စိတ်တော့နာအောင် သွားမလုပ်လေနဲ့…တစ်သက်လုံးလှည့်မကြည့်တတ်ဘူး!! ဒါပါဘဲ 😍
စကားနညျးတယျလိုပွောကွတယျ။ မသိတဲ့သူတှနေဲ့သာအေးတာ။ မကျြနှာထားတညျတတျလို့ မသိတဲ့သူတှကေ မာနကွီးတယျလို့ ပွောကွတယျ သူငယျခငျြးတှထေဲမှာဆို သူစကားအမြားဆုံး အပေါငျးအသငျးလညျးမြားတယျ။
လူခဈြလူခငျပေါသလောကျလူမုနျးလဲ မြားတယျ။ ဒါပမေဲ့ အကွောက သိတယျမလား။ ခှေးဟောငျတိုငျးထမကွညျ့တတျဘူး။ဉာဏျကောငျးသလောကျ အပငျြးကွီးတယျ။ဘယျလောကျပငျြးလဲ ဆို ပငျြးရမှာကိုပငျြးနတော။ စိတျအေးပမေဲ့ စိတျထကျတယျ။စိတျမွနျတယျ။
သဘောတော့ကောငျးတယျ။ စိတျကွီးတယျ။ မဟုတျမခံ ဆတျဆတျကွဲတှပေေါ့။ သညျးခံတတျတာလညျး ကွာသပတေး သားသမီးတှပေါပဲ။ တဈခါတဈလေ သူ့ကိုကွောလိုကျရငျ ရှတေ့ငျမှာ မကျြနှာမပကျြပမေဲ့ အိမျရောကျရငျ တနုံ့နုံ့ နဲ့ အအိပျပကျြ အစားပကျြပဲ။ (ဘယျလိုပွနျလုပျလိုကျရမှာဆိုပွီး)
သူတို့ကို သေးသေးတော့ သှားမတငျလနေဲ့။လုံးကွီးတငျပွီး အဆံပါခတျတတျတာလညျး ကွာသပတေး တှပေါပဲ။ အရှကျကွီးတယျ။ စာနာ နာလညျမှုလညျး ပေးနိုငျစှမျးတယျ။ ရှိသမြှလညျးပေးကမျးစှနျ့ကွဲဖို့ ဝနျမလေးတကျကွဖူး။ သူမြားမလုပျနိုငျဖူးဆိုတာကို ရှေးပွီလုပျပွတတျတယျ။
မလုပျရငျအရှငျးလုပျပွီဆိုရငျတော့ သူသရေငျသေ သူမသရေငျ ကိုယျအသေ ဆိုတဲ့လူစားမြိုးတှပေဲ။ ကွာသပတေး သားမီးတှကေို လိမျရငျတော့ သှားလိမျတဲ့သူတှကေ သူတို့အတှကျ လူရှငျတျောပါပဲ(သိသိကွီးနဲ့နားထောငျနတော)။
တဈခါသူတို့ကိုလိမျလိုကျရငျ နောကျဘယျတော့မှ အယုံအကွညျမရှိတော့ဘူး။အခဈြရေးမှာတော့ကံခသေူတှပေေါ့။ အမွဲတမျးရတာမလို လိုတာမရတှလေေ။ မရနိူငျတာကိုမှ တမျးတမျးစှဲနတေတျတာ။ ကွာသပတေး ဆိုတော့ စိတျဆိုး စိတျကောကျလှယျတယျ
စိတျမွနျ လကျမွနျလေးဒှေ ကွာကွာလဲ စိတျမဆိုးတတျကွဘူး။ ပြျောရှငျတဲ့ RS ကိုဖနျတီးယူတတျတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကွာသပတေး သားသမီးတှကေို အခဈြကွီးသူတှလေို့ ပွောကွတာ။ စိတျတော့နာအောငျ သှားမလုပျလနေဲ့…တဈသကျလုံးလှညျ့မကွညျ့တတျဘူး!! ဒါပါဘဲ 😍